Global Voices teny Malagasy » Kambodza: Hiverina Hanao Politika Ny Printsy Ranariddh · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Marsa 2018 4:21 GMT 1	 ·
Niala tamin'ny politika tamin'ny taona 2008, nahagaga ny rehetra tao Kambodza ny Printsy Ranariddh rehefa nanambara vao haingana fa hiverina hanao politika izy mba hanamafisana ny hetsika mandala ny fitondra-mpanjaka. Niresaka tao amin'ny faritanin'i Kampong Cham tamin'ny voalohandohan'ny volana teo anoloan'ny mpanohana 500 teo ho eo, nanoritra izy fa ho valin'ny fanangonan-tsonia fangatahana azy hiverina amin'ny fitarihana ao Kambodza izao fiverenany izao. Manazava bebe kokoa izy ao amin'ny Phnom Penh Post :
Ao amin'io lahatsoratra  io ihany, nanamafy ny fomba fijeriny elatra afovoany ny printsy fa sady tsy manohana izy no tsy manakiana ny governemanta. Amin'izany fomba fijery izany, manantena ny Printsy fa hiaraka amin'ny vondrona royalista sy izay antoko hafa vonona tahaka ny Antokon'ny Zon'olombelona. Na dia izany aza, sarotra ny manatontosa ity drafitra ara-politika ity satria misy ny fandavàna  sy ny fifandirana tsy voavaha eo amin'ireo vondrona samihafa. Misy ihany koa ny fanontaniana raha miara-dalana amin'ny demaokraty izy na komonista.
Naneho hevitra mikasika ny fiverenan'ny printsy eo amin'ny politika, nampitandrina ny praiminisitra Hun Sen fa hampifandray ny fanjakam-panjaka amin'ny governemanta izany ary mitaky ny fametraham-pialan'ny printsy amin'ny maha-mpanolotsainan'ny mpanjaka azy, dia ny rahalahiny Norodom Sihamoni izany. Manazava  ny antony tokony hialàn'ny printsy amin'ny maha-mpanolotsain'ny mpanjaka: i Hun Sen
Notsikerain'ny the Son of the Khmer Empire  (zanaky ny Ampira Khmer) izany fomba fijery izany, izay nanoratra fa tsy manana vina ara-politika mazava ny printsy ary mety ho tetika iray eo amin'ny printsy sy ny praiminisitra io tranga io.
Z avatra tsara ho an'ny politika Kambodziana ve ny fiverenan'i Norodom Ranaridh? 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/28/116298/